Falanqaynta Kulanka Darbiga: Chelsea Vs Manchester United, Blues Oo Kulankan Muhiimad Gooni Ah U Leh
Home Falanqeynta Kulamada Falanqaynta Kulanka Darbiga: Chelsea Vs Manchester United, Blues oo kulankan muhiimad gooni...
Chelsea ayaa marti galin doonta kooxda kaalinta labaad ee Manchester United kulan ka tirsan Premier League oo ka dhici doona garoonka Stamford Bridge , labada kooxood ayaa ku jira waqti feecan iyadoo dagaalka afarta sare uu sii xoogeysanayo. kulanka ayaa noqon kara kulanka ugu muhiimsan ee Chelsea sida warbaahinta Baahinayaan maanta.
Chelsea:- Chelsea ayaa rikoor fiican ka sameysay daafac ahaan intii uu ka hoos ciyaarayay Tuchel. Si kastaba ha noqotee, Chelsea waxay u muuqatay mid u nugul kulankan ama dhibaato ka qabta dhanka daafaca madama uu ka maqanyahay Thiago Silva marka loo eego wadnaha safka dambe.
Daaficii hore ee Paris Saint-Germain ayaa garoomada uga maqnaan doona dhaawac muruqa ah. Inta kale ee kooxda Chelsea waa la heli karaa.
Manchester United:- Manchester United ayaa walwal ka heestaa dhaawacyada marka loo eego Chelsea. Paul Pogba ayaa isna la maqan Juan Mata.
Donny van de Beek iyo Scott McTominay ayaa shaki laga galinayaa kulanka, si la mid ah Edinson Cavani.
Tabaraha Man United ayaa Shirkiisa Jaraa’id ku yiri
“Juan nasiib daro wuxuu maqnaan doonaa dhowr todobaad. Waxaan rajeyneynaa in [Scott, Donny iyo Edinson] la heli karo dhamaadka usbuuca laakiin ma hubo. Paul wali wuxuu maqnaanayaa dhowr todobaad, nasiib daro.”
Chelsea ayaa badisay kaliya labo ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeysay ee tartamada oo dhan, seddex jeer barbaro ayey gashay shanna waa laga badiyay kulamada ay ka hortagtay Red Devils.
Manchester United ayaa badisay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen Stamford Bridge tartamada oo dhan. Weligood kuma aysan diiwaangelinin afar guul oo isku xigta..
Chelsea ayaa ku guuldareysatay inay shabaqa soo taabato seddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah inkastoo ay isku dayeen 41 shuut.
Chelsea ayaan laga badinin sagaal kulan tartamada oo dhan, sideed ka mid ah waxaa hogaaminaya tababaraha cusub ee Thomas Tuchel.
Manchester United ayaa laga badiyay kaliya hal kulan 19 kulan oo Premier League ah, waxa ay badiyeen 12 kulan, lixna barbaro ayey galeen.
Previous articleFalanqaynta Kulanka Villarreal Vs Atletico Madrid ee Horyaalka La Liga Spain
Next articleFalanqaynta Kulanka Sheffield United Vs Liverpool ee Horyaalka Premier League